TABABARKII SANADLAHA AHAA EE ARDAYDA DUGSIYADDA SARE KA QALIN JABISAY OO SI HABSAMI LEH U SOCDA – Hope Generation – جيل الأمل
TABABARKII SANADLAHA AHAA EE ARDAYDA DUGSIYADDA SARE KA QALIN JABISAY OO SI HABSAMI LEH U SOCDA
Waxaa alle mahaddii ah in maalintii labaad uu galay tababar socon doona Afar (4) isbuuc insha alaah. kaasoo loogu talagay ardayda ka qalin jabisay Dugsiyadda Sare ee Gobolka Banaadir ayna soo qabab qaabiyeen Ururka dhalinta rajadda somaaliyeed (Hope Generation).
Tababarka waxaa ardayda lagu barayaa sidii ay u dooran lahaayeen Takhasus ku haboon marxaladda jaamacadda.
Waxaa nasiib u helay wajiga 1-aad ee Tababarka Dufcadda 1-aad oo ahaa ardaydii hore isu diiwaangalisay, intii ay dhaaftay weli fursad bay haystaan waana u furan yahay, kaliya waa inay si rasmi ah isu diiwaangaliyaan.
Waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan intii ka qeyb qaadatay, intii fududeysay iyo intii ka shaqeysay howshan culus ee wadaniga ah. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelineynaa dhamaan macalimiintii waqtigooda qaaligaa noo soo huray dhalinyaradoodana uga faa’iideeyay, Al ustaad Abdulkadir Mohamed Shaylilah, Al ustaad Yoonis Xuseen Gaabane Macalimad Umu Cabdirabbi Cali , Al ustaad Maxamed Macallin Aadan, Al ustaad Adam Hussein , Al ustaad الحاج موسى , Al ustaad Ahmed Sheikh Abdullahi Maadka
Kala xiriir wixii faahfaahin ah Tel: 0617630450
F.G. Tababarku waa lacag la’aan.